Umvuzo Wokusekela | Uthando, ubulili kanye ne-intanethi | Ukuyeka izithombe ezingcolile
Wonke Amabhulogi avela ku-The Reward Foundation
Cha. 14 Autumn 2021
Ingqungquthela Yokuqinisekisa Ubudala 2020 Izinto
Amasu Wokufunda Ezikoleni… Ucwaningo olusha… Izisekelo Zobuchopho… Imiphumela Yengqondo Yezocansi… Uthando… Erectile Ukungasebenzi… Ubudlelwano…Umthetho…Quizzes ukubheka ukuthi i-porn ithinta wena… Usizo ngokuyeka izithombe zobulili ezingcolile
I-Reward Foundation ingumthombo obalulekile wolwazi olususelwa ebufakazini mayelana nobudlelwano bothando kanye nomthelela wezithombe zocansi ze-intanethi kwezempilo yengqondo nangokomzimba, ubudlelwano, ukutholakala kanye nesikweletu esisemthethweni.
Ukudlwengula kanye Nezocansi
I-26th ngo-November 2021
Umhlahlandlela wabazali ohamba phambili wezithombe zobulili ezingcolile ze-Intanethi.
Izingane eziphethwe ingqondo!
Ukusetshenziswa Kwezinkinga Zobunzima: Ukucatshangelwa Kwenqubomgomo Yezomthetho Nempilo
I-10th Septhemba 2021
12th Agasti 2021
I-30th Meyi 2021
I-Online Safety Bill- izovikela izingane yini ku-hardcore porn?
I-18th Meyi 2021
Chofoza Lapha ukuze uthole izindaba eziningi ze-Blogs
I-Reward Foundation ubuhlobo bokuphayona kanye nemfundo yokupha ngocansi. Igama livela eqinisweni lokuthi uhlelo lomvuzo lobuchopho lunesibopho sokushayela kwethu uthando nezocansi kanye neminye imivuzo yemvelo njengokudla, ubusha nokutholakala. Uhlelo lokuvuza lungadunwa yimivuzo eqinile yokufakelwa njengezidakamizwa, utshwala, i-nicotine kanye ne-inthanethi.
IRoyal College of General Practitioners igunyaze iworkshop yethu yokuqeqeshelwa ezempilo kanye nabanye ochwepheshe ngomthelela wezithombe zocansi eziku-inthanethi ingqondo futhi impilo yempilo, kufaka phakathi ukungasebenzi kahle kwezocansi. Ukusekela lokhu, senza ucwaningo ngocansi, ucansi kanye ne-inthanethi litholakale emphakathini obanzi. Bona eyethu yamahhala izinhlelo zokufunda ezikoleni manje sezitholakala kokubili kule webhusayithi naku- Iwebhusayithi ye-Times Educational Supplement, futhi mahhala. Bheka futhi eyethu Yiba ngumhlahlandlela wabazali omkhulu kakhulu wabazali ezithombeni ezingcolile ze-intanethi. Cishe akunakwenzeka ukukhuluma ngothando nobudlelwano bezocansi namuhla ngaphandle kokuvuma indima yezithombe zocansi ze-intanethi. Kuthonya okulindelwe nokuziphatha, ikakhulukazi phakathi kwentsha.
Ucwaningo yiBritish Board of Film Classization ithole ukuthi e-UK 1.4 million izingane ngenyanga zibukela ezocansi. Iminyaka engu-60 noma ngaphansi yayineminyaka engama-62% yezingane okokuqala yabona i-inthanethi online. Iningi, elingamaphesenti angama-83, lithe bakhubeke ngengozi ngalo futhi bengalindele ukubona izithombe zocansi. Iningi labazali, amaphesenti angama-56, bangathanda ukubona ukuqinisekiswa kobudala kwethulwa kulezi zingosi eziyingozi. Futhi amaphesenti angama-11 wezingane ezineminyaka engu-13 kuya kwengu-18 angathanda ukuvikeleka ezintweni ezibonakalayo ezikwi-inthanethi ezingaphezu kuka-XNUMX.
Sincoma le minithi ye-2 izithombe njenge-primer. Ukuthola incazelo enhle yemiphumela ye-porn ebuchosheni, bukela lokhu Isikhathi se-5 sikhishwe kusuka kudokhumentari ye-TV. Ifaka i-neurosurgeon, ucwaningo oluvela eNyuvesi yaseCambridge kanye nokuhlangenwe nakho okukhona kwabanye abasebenzisi abasha.
Nazi ezinye ezilula ukuzihlola izivivinyo eziklanywe ngabasebenza ngama-neuroscientist ukubona ukuthi ngabe i-porn ithinta wena noma umuntu osondelene nawe.
Izithombe zobulili ezingcolile ze-Intanethi azifani nezocansi zesikhathi esedlule. Kuyisikhuthazo 'esingajwayelekile'. Kungathinta ubuchopho ngendlela efanayo ne-cocaine noma i-heroin lapho ibanjwa kaningi. Izithombe zocansi azifanelekile ikakhulukazi ezinganeni ezakha ama-20-30% wabasebenzisi kumasayithi abantu abadala. Lokhu kukodwa kuvumela umthetho wokuqinisekisa iminyaka kahulumeni wase-UK ukunqanda ukufinyelela kwezingane nokuvikela impilo yazo.
Izingane ezineminyaka eyisikhombisa ubudala zitholwa nezithombe ezingcolile zobulukhuni ngenxa yokuntuleka kokuhlolwa okusebenzayo kweminyaka ngokusho ucwaningo ithunywe yiBritish Board of Film Classization. Izithombe zocansi zenzelwa inzuzo, ziyimboni yamadola ezigidigidi. Ayenzelwe ukufundisa izingane ngocansi nangobudlelwano.
Isilingo Esikhulu Esingavunyelwe Somphakathi
Akukaze kwenzeke emlandweni ukuthi izinto eziningi zocansi ezikhuthaza kakhulu zitholakale ngokukhululeka njengamanje. Yisilingo sezenhlalo esikhulu kunazo zonke, esingalawulwa emlandweni wesintu. Esikhathini esidlule izithombe zobulili ezingcolile ezinzima kwakunzima ukufinyelela kuzo. Ngokuyinhloko ibivela ezitolo zabantu abadala ezinelayisense ezivimbela ukungena kunoma ngubani ongaphansi kweminyaka engu-18. Namuhla, izithombe zocansi eziningi zitholakala mahhala ngama-smartphone namaphilisi. Ukuqinisekiswa kweminyaka esebenzayo kwezivakashi akukho. Ukusetshenziswa ngokweqile kukhiqiza i- ububanzi obubanzi of ingqondo futhi ngokomzimba izingqinamba zezempilo njengokukhathazeka komphakathi, ukudangala, ukungasebenzi kahle kwezocansi nokulutha ukusho okumbalwa. Lokhu kwenzeka kuwo wonke amaqembu eminyaka yobudala.
Ucwaningo lubonisa ukuthi ukuzitika ngezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kunganciphisa inzalo, nokwaneliseka okuvela ebudlelwaneni bezocansi bangempela. Inani elandayo labesilisa abasebasha kuya eminyakeni yobudala abakwazi ukwenza ucansi nabalingani babo. Intsha iya iba nolaka futhi ibe nodlame ekuziphatheni kwayo kwezocansi nayo.
Inhloso yethu ukusiza abantu abadala kanye nabaqeqeshiwe ukuthi bakwazi ukuthola ubufakazi abadingayo ukuze bazizwe beqiniseka ngokwanele ukuba bathathe isinyathelo esifanele ukusiza iziguli zabo, amaklayenti nezingane zabo siqu. Kwesikhashana ukuqeda ukushaya indlwabu, noma ukunciphisa imvamisa yomuntu, kumayelana nokululama ekuluthweni nasezinkingeni zocansi ezibangelwa ucansi - akukho okunye. I-Reward Foundation ayikhuthazi ukuzithiba njengendlela yokuphila unomphela.
'Amandla Wezimboni' I-Porn ye-Intanethi
Ukungenisa i-porn kungaba nomthelela ongemuhle empilweni yezocansi, ngokomqondo, ekuziphatheni, ebudlelwaneni, ekutholeni, ekukhiqizeni nasebugebengwini. Uma nje umsebenzisi eqhubeka nokuyaluma, izinguquko zobuchopho ziba zigxilile futhi kube nzima ukubuyela emuva. Ukusetshenziswa ngezikhathi ezithile akunakwenzeka ukudala ukulimala okungapheli. Ukulungisa ushintsho olusebenzayo lobuchopho bekulokhu okuqoshiwe nokusetshenziswa okuncane kwamahora amathathu kwezithombe zocansi ngesonto.
Ubuchopho bethu abuvumelananga nezimo zokubhekana nokukhuthaza okukhulu kakhulu kwe-hyper. Izingane zisengozini enkulu yokunikezwa okungapheli kwama-porn, ukusakazwa kwezithombe zobulili ezingcolile. Lokhu kungenxa yomphumela wayo onamandla kubuchopho babo obucayi esigabeni esikhulu sokuthuthuka nokufunda kobungqingili.
Izithombe zocansi eziningi ze-inthanethi namuhla azikhombisi ukusondelana nokuthembana, kepha ubulili obungaphephile, ukugqugquzela kanye nodlame, ikakhulukazi kubantu besifazane nakumahlanga amancane. Izingane zihlelela ubuchopho bazo ukuze zidinge ubutsha obuqhubekayo kanye namazinga aphezulu okuqalwa okuvuselelekile abangahlangani nabo empilweni yangempela. Kuyabaqeqesha nabo ukuba abe-voyeurs.
Ngakolunye uhlangothi abaningi bazizwa benganele ngocansi futhi behluleka ukufunda amakhono okuhlangana nabawadingayo ukuthuthukisa ubudlelwane obunempilo nobusondele isikhathi eside. Lokhu kuholela ekubeni nesizungu, ukukhathazeka komphakathi kanye nokudangala kwenani elandayo.
Iningi labantu abasha okokuqala babuka izithombe zobulili ezingcolile bekungelona elenzeka ngengozi, kanti izingane ezingaphezu kwezingu-60% ezingu-11-13 ezike zabona izithombe zocansi zithi ukubuka kwazo izithombe zobulili ezingcolile akuhlosile ngokusho kwamuva ucwaningo. Izingane zichaze ukuzizwa "zikhungathekile" futhi "zididekile". Lokhu kusetshenziswe ikakhulukazi lapho bebona izithombe zocansi ezingaphansi kweminyaka eyi-10.
Lokhu kungamangaza abazali abaningi. Uma ufuna ukufunda kabanzi, bheka eyethu Yiba Umzali omuhle - Umhlahlandlela Wabazali Ohamba Phambili Kwezithombe Zobulili Ezingcolile Ze-Inthanethi . Ihlose ukusiza ukuhlomisa abazali nabanakekeli ngalezo zingxoxo eziyinselele nezingane zakho nokuxhumanisa ukwesekwa nezikole uma kudingeka. Amaphoyisa aseKent baxwayise ngokuthi abazali bangashushiswa ngokuthumela imiyalezo yocansi yezingane uma benesibopho senkontileka yocingo. Bona ikhasi lethu mayelana ukuthumelelana imiyalezo yocansi kanye nomthetho eScotland Futhi kuthunyelwa imiyalezo yocansi ngaphakathi I-England, Wales neNyakatho Ireland.
Sisanda kwethula uchungechunge lweMAHHALA izinhlelo zokufunda othisha abazobhekana ne- "Introduction to Sexting"; "Ukuthumelelana imiyalezo yocansi nobuchopho bentsha"; “Ukuthumela imiyalezo ngocansi, umthetho kanye nawe”; “Izithombe Zobulili Ezingcolile Zivivinywa”; “Ezothando, Ezocansi Nezocansi”; "Izithombe Zobulili Ezingcolile Nezempilo Yengqondo", kanye ne- "The Great Porn Experiment". Ziqukethe izindlela ezahlukahlukene zokucebisa, ukuzijabulisa nokusebenzisana kanye nezinsizakusebenza ezinikeza isikhala esiphephile sokuba abafundi bakwazi ukuxoxa ngazo zonke lezi zindaba ezibalulekile. Alikho icala noma amahloni, amaqiniso kuphela, ukuze abantu bakwazi ukwenza izinqumo ezinolwazi.
Izifundo zamanje nazo zilungele izikole ezenzelwe ezenkolo. Azikho izithombe zobulili ezingcolile eziboniswayo. Noma yiluphi ulimi olungaphikisana nemfundiso yenkolo lungashintshwa.
Ucwaningo Lwama-Reward Foundation
I-Reward Foundation ibheka ucwaningo olusha nsuku zonke futhi ifaka nentuthuko ezintweni zethu. Siphinde sikhiqize ucwaningo lwethu, ikakhulukazi Izibuyekezo yocwaningo lwakamuva ukuze abanye bakwazi ukuhlala besesikhathini ngentuthuko entsha.
Kukhona manje izifundo eziyisithupha okukhombisa a isixhumanisi se-causal phakathi kokusetshenziswa kocansi nokulimaza evela kulowo msebenzi.
E-Reward Foundation siyabika izindaba kusuka ezinkulungwaneni zamadoda nabesifazane abaye bathuthukisa okuyinselele ukusetshenziswa kocansi kwe-inthanethi. Lolu cwaningo olungakahleleki lubalulekile ekubhekeni izitayela zamanje ezingathatha isikhathi eside ukuthi ziboniswe ocwaningweni oluhlelekile lokufunda. Abaningi bazamile ukuyeka i-porn futhi bathola izinzuzo ezahlukahlukene ngokwengqondo nangokomzimba ngenxa yalokho. Bona le nsizwaindaba kaNksz.
Izinkampani zezithombe zocansi bezihamba phambili ekuthuthukisweni nasekuklanyeni kwe-intanethi. Ukwanda ngokweqile kwezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kudala ukuthi ubuchopho bukhiqize izifiso ezinamandla zokuningi. Lezi zifiso zithonya imicabango nokuziphatha komsebenzisi we-porn ngokuhamba kwesikhathi. Ezinanini ezikhulayo zabasebenzisi lokhu kungaholela ku- ukucindezela ukuziphatha kwengculazi. Lokhu kuxilongwa kusanda kuvezwa ukubukeza kweshumi nanye kweNhlangano Yezempilo Yezwe Yokwahlukaniswa Kwezifo (ICD-11) kubandakanya ukusetshenziswa kocansi okuphoqelela nokushaya indlwabu. I-porn engalawulwa nokushaya indlwabu nayo ingahlukaniswa njengesifo sokulutha ngaphandle kokungaqondakali kusetshenziswa i-ICD-11.
Ngokusho the ucwaningo lwamuva, ngaphezu kwe-80% yabantu abafuna usizo lwezokwelapha ngombiko wokuziphatha ngokocansi okuphoqelekile banenkinga ehlobene nezocansi. Buka lokhu okuhle kakhulu Inkulumo ye-TEDx (Imizuzu eyi-9) kusuka ngoJanuwari 2020 nguCasper Schmidt, isazi sezinzwa zeCambridge University, ukuze afunde nge- "Compulsive Sexual Behavior Disorder".
Izithombe zocansi namuhla 'zingamandla ezimboni' ngobungako obutholakalayo namazinga okukhuthaza, uma kuqhathaniswa nezithombe zobulili ezingcolile zeminyaka eyi-10 noma eyi-15 edlule. Ukusetshenziswa kwayo kuyisinqumo somuntu siqu, asizimisele ukuvimba izithombe zocansi ezisemthethweni kubantu abadala, kepha izingane kufanele zivikelwe. Ukushaya indlwabu ngokweqile okugqugquzelwa yizithombe zobulili ezingcolile kungaholela ezindabeni zezempilo yengqondo nengokomzimba kwabanye. Sifuna ukusiza abasebenzisi ukuthi babe sesimweni sokwenza ukhetho 'olunolwazi' ngokuya ngobufakazi obuhle kakhulu obuvela ocwaningweni olutholakalayo njengamanje kanye nezinketho zokutholwa kwezimpawu, uma kudingeka. Kwesikhashana ukuqeda ukushaya indlwabu, noma ukunciphisa imvamisa, kumayelana nokubuyiselwa esimweni sokulutha, isimo socansi kuya kuzinto ezibonakalayo ezinzima nezinkinga zocansi ezibangelwa ucansi - akukho okunye. I-Reward Foundation ayikhuthazi ukuzithiba njengendlela yokuphila unomphela.
Sikhankasela ukunciphisa ukutholakala kwezingane kalula ezithombeni ezingcolile ze-intanethi. Izinqwaba ze- ucwaningo amaphepha akhombisa ukuthi kulimaza izingane ezingeni labo elisengozini yokukhula kobuchopho. Kube nokukhuphuka okumangazayo kokuhlukunyezwa ngokocansi kwengane nengane eminyakeni eyisi-8 eyedlule nasekulimaleni okuhlobene nocansi okuhlobene nocansi ngokusho kochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo abake baya emihlanganweni yethu yokufundisana futhi mhlawumbe ngisho ukufa. Ixhumene nodlame lwasekhaya, olwenziwa ikakhulu ngabesilisa ngabesifazane.
Sivuna imizamo kahulumeni wase-UK yokuphoqelela ukuqinisekiswa kweminyaka okusebenzayo kwezingosi zezentengiso zocansi kanye nezingosi zokuxhumana ukuze izingane zingakhubeki kalula kuzo. Ngeke isuse isidingo semfundo mayelana nobungozi. Futhi ngubani ozuzayo uma singenzi lutho? Imboni yezocansi yezigidigidi zamaRandi. Uhulumeni wase-UK uhlela ukubhekana nezocansi ezitholakala ezinkundleni zokuxhumana kulokhu kuhlongozwayo Iphepha elimhlophe ku-Harms Online. Akunakwenzeka ukuthi kube ngumthetho kuze kube ngu-2024 ekuqaleni.
Imininingwane ekule webhusayithi ingasiza abantu ukuthi bathuthukise amathuba abo okuba nobudlelwano bezocansi obuphumelelayo nobunothando. Sihlela izingxenye ezintsha zewebhusayithi engxenyeni yesibili yonyaka we-2020. Uma ungathanda noma yisiphi isihloko esihlobene naleso sengezwe, sicela usazise ngokuxhumana nathi ku info@rewardfoundation.org.
Isisekelo Somvuzo siyakwenza hhayi ukunikeza ukwelashwa noma ukuhlinzeka ngezeluleko zomthetho. Kodwa-ke, senza izindlela ezinqobayo zokuthola usizo kubantu abasebenzise kube yinkinga. Inhloso yethu ukusiza abantu abadala kanye nabaqeqeshiwe ukuthi bakwazi ukuthola ubufakazi kanye nokusekelwa ukuwavumela ukuthi athathe isenzo esifanele.
I-porn ye-Intanethi imahhala, kepha izingane zikhokha inani